Kanaalka Soo-galootiga ah ee Weyn ayaa Weyn ... oo aan la Daaweyn | Martech Zone
Inbound Call Channel waa Huge… iyo Untapped
Thursday, April 10, 2014 Jimco, Abriil 11, 2014 Douglas Karr
Hal wershadood oo aan si weyn loo hubin iyo fursad weyn oo ay u helaan suuqleydu waa raadinta wicitaanka. Maaddaama taleefannada casriga ahi ay ku sii faafayaan ganacsiga akhrinta emaylka, raadinta ganacsiyada, iyo baaritaanka iibsigeenna - dad aad iyo aad u tiro badan ayaa si fudud adigoo gujinaya lambarka taleefanka waxay ka helayaan goobta. Shirkadaha ka xayeysiiya kanaallada warbaahinta, tani waa dhibaato weyn maxaa yeelay waxay si khaldan u tabiyaan kanaalka dhaliya wicitaanka, hoggaaminta iyo beddelaadda.
Waxaan leenahay macmiil arrintan leh - oo siinaya isla taleefan nambarkooda telefishannada sida ay ku sameeyaan barxadda ay ku leeyihiin, xayeysiintooda dhijitaalka ah, iyo guud ahaan waxyaabaha ay ka faa'iideystaan ​​macaamiisha laga helo ilo kala duwan - laga bilaabo raadinta ilaa bulshada. Qalad-xumada gudaha ka jirta ayaa ah in qof kasta oo wacaa lambarka loo nisbeeyo xayeysiinta telefishanka - laakiin tani si uun maahan kiiska gebi ahaanba.
Infograafigani wuxuu ka yimid Wicitaanada, madal daruur ku saleysan oo bixisa maareyn olole, sifo cad, wax ku ool ah Analytics iyo qalabka isdhaafsiga moobiilka.
Tags: sifo u yeeranwac suuqgeyntawac otomaatiga suuq geyntaraad raadinSoo-galitaanka Wicitaanka Soo-galinta Wicitaankawicitaanada soo galainvocaiibinsmartphone
Faahfaahin weyn, Douglas! Wicitaanadu waa sidaas, sidaa darteed, waa muhiim. Codka ugu dheer (IMHO) waa moobilku ma badalayo. Khibradeyda, haddii aad raadineyso wicitaanno, moobilku wuu beddelayaa. Waxayna sifiican u badalaysaa. Xaaladaha ganacsiyada ku saleysan adeegga, way ogyihiin haddii ay ku heli karaan hoggaanka taleefanka sicirka beddelaadda-iibinta ayaa aad uga sarreeya.